၂၀၁၂ ရုပ်ရှင် (၂၀၀၉)
နိဗ္ဗာန်ဘုံတွင် လမ်းပျောက်ခြင်း (ရုပ်ရှင်)
အာဒမ်ရယ် ဧဝရယ် ဒသရယ်
စစ်မှန်သော (၂၀၁၇ ရုပ်ရှင်)
၂၀၁၇ ခုနှစ် လန်ဒန်မာရသွန်
ဒိုရေမွန်: နိုဘိတ၏ လပေါ်စူးစမ်းရေးခရီးစဉ်မှတ်တမ်း
မောင့်မူပိုင်ရှင် (၂၀၀၀ ရုပ်ရှင်)
ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏တမန်ဖြစ်သော ငါ ပေါလုသည် ဧဖက်မြို့၌ရှိနေသော သန့်ရှင်းသူတည်းဟူသော ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကို ကြားလိုက်ပါ၏။ ၂ သခင်ယေရှုခရစ်နှင့် ငါတို့အဘ ဘုရားသခင့်အထံတော်က ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သင်တို့၌ရှိပါစေသ ...
၁။ စံတော်မီဝိသေသလက္ခဏာ ဩဗဒိဗျာဒိတ်ရူပါရုံ” ကျမ်းသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အတိုဆုံးနှင့် ကျမ်းစာတအုပ်လုံးတွင် တတိယအတိုဆုံးဖြစ်သည်။ ဦးတည်ချက်မှာ ယာကုပ်၏ အမွှာအစ်ကို ဧသောအမျိုး ပျက်စီးမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ သမိုင်းစဉ်ကာလတလျှောက်လုံး ဧဒုံလူမျိုးများသည် ဣ ...
Creative Commons လိုင်စင်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Lawrence Lessig စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်စင်အများစုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အွန်လိုင်း Creative နှင့်ပတ်သတ်၍ လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လိုင်စင်အုပ်စုများတွင် Some rights reserve ...
ဂျင်မီဒေါ်နာ "ဂျင်ဘို" ဝေးလ်စ် သည် အမေရိကန် အင်တာနက် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဝီကီပီးဒီးယားအား တွဲဖက်တည်ထောင်ကာ တွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်နေသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဝီကီမီဒီယာရန်ပုံငွေအဖွဲ့၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ဘုတ်အဖွဲ့မှ ခန့်အပ်သည့် "အဖွဲ့အစည်းထူထောင်သူ ...
ဝီကီပီးဒီးယား သုည သည် ဝီကီမီဒီယာ ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဝီကီပီးဒီးယားအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ထောက်ပံ့ပေးထားသော ပရောဂျက်တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင် အခကြေးငွေမပေးရဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။အစီအစဉ်အား ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် စတင် ...
စက်တင်ဘာလ ရက်နေ့ က နာမည်ကျော် ဆိုဗီယက်စာရေးဆရာ အိလျ အာရင်ဘတ် ကွယ်လွန်ကြောင်း ဆိုဗီယက်စာရေးဆရာသမဂ္ဂ ကျေညာချက်သတင်းကို စောင့်ကြပ်မှူး အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ၌ ဖတ်လိုက်ရသည်။ သတင်းမှာ မထင်မရှားနေရာမှ ဖော်ပြသဖြင့် လူများ သိပ်သိပုံမရကြ။ စာရေးဆရာများပင် မသိလို ...
ဂရိဒဏ္ဍာရီတွင် ရွှေရောင်သိုးမွှေး ဆိုသည်မှာ ကောလ်ကစ်ဒေသ၌ရှိသော "ခရီဆောမားလော့ရှ်" ခေါ် အတောင်ပါ၍ ရွှေရောင်ရှိသော သိုးထီး၏ အမွှေးကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းသိုးမွှေးသည် အာဏာ နှင့် သက်ဦးဆံပိုင် အုပ်စိုးမှု၏ အမှတ်သညာဖြစ်သည်။ အိုင်ယောကပ်စ်ဘုရင် ပီးလီယပ်စ်၏ အ ...
မကန်း ။ ။ အော်-ဆွေမစုံဖက်၊ ဖြေပုံခက်အောင်၊ မကန်းကွက်ချွန်၊ တိမ်ရွက်ကွန်လဲ၊ လက်ပုစွန်ရိုး အစ ချီသည့် ဦးကြင်ဥရေး ပဒေသာသီချင်းမှ တန်ခူးလဘွဲ့တွင် တိမ်များသည် မကန်းကောင်၏ အကြေးကွက်များသဖွယ် အထပ်ထပ် အကွက်ကွက် ထနေသည်ဟု ဆိုထားသည် တစ်ကြောင်း၊ မင်းပူးဆရာတေ ...
အီစွပ်ပုံပြင် ဟူသည်မှာ အီစွပ်ဆိုသူ ဂရိကျွန်တစ်ဦးက ပြောပြ ခဲ့သော ပုံပြင်များကို ဆိုလိုသည်။ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ အားဖြင့် သိရသည်မှာ အီစွပ်သည် ဂရိလူမျိုးဖြစ်၍ ဘီစီ ၆၂ဝ ပြည့်နှစ်မှ ၅၆ဝ ပြည့်နှစ်အတွင်းက နေထိုင်ခဲ့သည်။ သူသည် ကျေးကျွန် တစ်ဦး ဖြစ်ပြီးလျှင် အရုပ် ...
ချီဘီမာရူကို-ချန် သည် ဂျပန်ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိုမိုကို ဆာကူရာမှ ရေးသားပုံဖော်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ မိုမိုကို ဆာကူရာ၏ ငယ်စဉ်ကာလဖြစ်သော ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် မာရူကိုအမည်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်က ရိုးရှင်းသော နေ့စဉ်ဘဝနှင့် သူမမိသားစုအကြောင်းကို သရု ...
လပြည့်ညရဲ့စိန်ခေါ်သံ သို့မဟုတ် ဒဏ္ဍာရီထဲကဓား ဟု လူသိများသည့် ချင်ဒဏ္ဍာရီသည်ရော်ဘင်ရှန်ရိုက်ကူးသော တရုတ်ကာတွန်းရုပ်ရှင် ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။ဇာတ်လမ်းကို ထိုင်ဝမ်စာရေးဆရာ ဝှမ်းရှစ်ရန် ရေးသားသော အမည်တူဝတ္ထုပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။တရုတ်၏ ပထမဆုံးသော သုံးဘ ...
ကြိုဆိုပါ၏ သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂင်မြောင်ဆူ၊ ရှင်းယီအန်း နှင့် ဆိုးဂျီဟွန်းတို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲ၏ အခြားအမည်မှာ ညောင်၊ လျှို့ဝှက်သောကောင်လေး ဖြစ်သည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် နာဗာ ဝက်ဘ်တွန်းမှ ဂိ ...
ဆန်းကြယ်သောဖူးစာ ၊အင်္ဂလိပ်: Encounter/Boyfriend ၊ မူရင်းမြန်မာပြန်: ချစ်သူကောင်လေး) သည် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပြီး ဆောင်းဟေကိုနှင့် ပတ်ဘိုဂွံတို့က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ tvN ရုပ်သံလိုင်းတ ...
နတ်သားလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမစ်ရှင်: အချစ် သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရှင်းဟေဆွန်း၊ ဂင်မြောင်ဆူ၊ လီဒုံဂွမ်၊ ဂင်ဘိုမီ၊ ဒိုဂျီဝန်းနှင့် ဂင်အင်ဂွမ်တို့မှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဤရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့် ကြာသပ ...
ဘုရင်မသစ္စာ သည် ဟဂျီဝန်မှ မိဖုရားဂီ အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး MBC ရုပ်သံမှ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၈ မှ ၂၀၁၄ ဧပြီ ၂၉ အထိ ပြသခဲ့သည်။
မင်းတို့အိပ်ပျော်နေခဲ့တုန်းက သည် ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လီဂျွန်ဆောက်၊ ဘဲ့ဆူဂျီ၊ လီဆောင်ရောက်၊ ဂျောင်ဟယ်အင်း တို့မှအဓိက သရုပ်ဆောင်ကာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၇ မှ နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်ထိ တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံ SBS တွင် ပြသခဲ့သည်။ အပိုင်း ၃၂ ...
မြို့ပြမုဆိုး သည် ​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ​၂၀၁၁ခုနှစ် ​မေလ၂၅ရက်​နေ့မှ ဇူလိုင် ၂၈ရက်​နေ့အထိထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့​သောဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။လီမင်ဟိုနှင့် ပတ်မင်​ယောင်းတို့မှ သရုပ်​ဆောင်ထားသည်။ ဂျပန်ကာတွန်း City Hunter ကိုအ​​ခြေခံ၍ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။
ရိုဗိုကား ပိုလီ ကာတွန်တောင်ကိုရီးယားဖြစ်ပါတယ် RoiVisual ကဖန်တီးခဲ့သည် စီးရီးဖြန့်ချိ Educational Broadcasting System 2011 ခုနှစ်တွင် ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲအပေါ်ထုတ်လွှင့် နှင့်4ရာသီထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်
ဝိုင်ကီကီမှ ကြိုဆိုပါ၏ သည် ကင်ဂျွန်ဟွန်း၊ လီယီကျောင်း၊ ဆန်ဆောင်းဝန်တို့ ပါဝင်သော ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်မှဧပြီလ ၁၇ရက်​နေ့ထိ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဇွန်လ၆ရက်​နေ့တွင် အတွဲကိုဆက်လကွရိုက်ကူးမည်ဖြစ်​ကြောင်း​​​ထု ...
ဝေဟင်ထက်က ချစ်ကြယ်စင် (ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဝေဟင်ထက်က ချစ်ကြယ်စင် သည် တောင်ကိုရီးယား ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင် ဂျွန်ဂျီဟွန်း၊ ကင်ဆိုယွန်း၊ ပတ်ဟေးဂျင်နှင့် ယူးအင်နာတို့က သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ SBS ရုပ်သံလိုင်းမှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက ...
ဇာတ်လမ်းသည် ဝေးလံသော ကျွန်းဒေသများမှ ရွာများတွင်နေထိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို အစောင့်အရှောက်ပေးသော လူငယ်ဆရာဝန်များအကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဆုန်းအွန်းဂျေမှာ ဆိုလ်း မြို့ရှိ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဖြစ်သည်။ သူမ၏အမေ ဆုံးပြီးနောက် ခွဲစိတ်မှုတစ်ခု၌ သ ...
ဟိုတယ် ဒယ်လူနာ (ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဟိုတယ်ဒယ်လူနာ သည် ယိုဂျင်ဂူးနှင့် လီဂျီအွန်း တို့ ပါဝင်သရုပ်​ဆောင်ထား​သော ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်သည်။​တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၃ရက်​နေ့မှ စက်တင်ဘာလ၁ရက်​နေ့အထိ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့သည်။ဤဇာတ်လမ်းတွဲသည် cable ရုပ်မြင်သံကြားသမိ ...
နိုင်ငံတကာတွင် ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို ထိုင်ဝမ်ရုပ်မြင်သံကြားမှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဟောင်ကောင် TVB ရုပ်သံလိုင်းမှ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဒေချန်ဂင် ဇာတ်လမ်းတွဲပြီးနောက် ပြသခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းနှစ်ခု၏ ဇာတ်အိမ်တည်ဆောက်ပုံ ဆင်တူမှုကြောင့် ဟောဂျွန်ကို ...
Guardian: The Lonely and Great God သည် ဂုန်ယူး၊ လီဒုံဝု၊ ကင်ဂိုအွန်၊ ယူးအင်နာနှင့် ယုစန်ဂျေတို့ ပါဝင်သော တောင်ကိုရီယားတီဗီဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ၂၀၁၇ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ရက်နေ့အထိ tvN မှ အပတ်စဉ် သောကြာနှင့် စနေနေ့တိုင်း ည ၈နာရီ ထု ...
အိမ်ထောင်သည်လောက သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် တောင်ကိုရီးယားရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဓိကဇာတ်ဆောင်များမှာ ဂင်မ်ဟီအဲ နှင့် ပတ်ဟေးဂျန်ဖြစ်သည်။ BBC One ၏ ဗြိတိန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဒေါက်တာဖော့စ်တာကို အခြေခံထားသည့် ဤဇာတ်လမ်းတွဲကို JTBC ရုပ်သံလိုင်းတွင် မတ် ၂၇ ...
ကျွန်မက မဟေသီ (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ကျွန်မက မဟေသီ သည် ၂၀၁၉ ခုထွက် မြန်မာ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ သျှင်မ၏ ဝတ္ထုကို အေးမို့မို့အောင်နှင့် အေးချမ်းမွန်တို့ ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး အိအိခိုင် ရိုက်ကူးသည်။ အောင်ရေချမ်း၊ ဝင့်ယမုံနိုင်နှင့် သံသာမိုးသိမ့်တို့ အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားသည်။
ဆူးပန်းခွေသွယ်ဘယက်နှင့်ပေရွက်လိပ်နားတောင်းဆင် သည် ၂၀၂၀ မြန်မာ ဒရာမာရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ MRTV-4 မှ တနင်္လာမှ သောကြာထိ ည ၇ နာရီတွင် ထုတ်လွှင့်ပြီး၊ ၄၃ ပိုင်း ရှိသည်။
ဇနီးချောများ ကွန်ရက် (ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ)
ဇနီးချောများ ကွန်ရက် သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားမှ ထုတ်လွှင့်သော ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ လွန်းထားထား ၏ ဝတ္ထုကို အောင်ပြည် ဖျော်ဖြေရေးအတွက် ဇော်မြင့်ဦး ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး အောင်ဩဘာ ရိုက်ကူးသည်။ နေယံ၊ ဖိုးသောကြာ၊ ဇေယျ၊ ကျော်ကျော်၊ ...
မျက်လုံးမှာအလွမ်း နှုတ်ခမ်းမှာမာန သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် MRTV-4 ရုပ်သံလိုင်း၌ တနင်္လာ မှ သောကြာ တွင် ထုတ်လွင့်ပြသသော မြန်မာဒရာမာ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။
စီအက်စ်အိုင် - မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန
စီအက်စ်အိုင် - မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန မှုခင်းစစ်ဆေးမှုကို အခြေခံ ရိုက်ကူးထားသည့် အမေရိကန် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ ဇာတ်လမ်းတွင် လောင်းကစားမြို့တော် လာ့စ်ဗေးဂတ်စ်၌ ဖြစ်ပွားသည့် လူသတ်မှုများအား ဖော်ထုတ်ပုံကို အဓိကထား တင်ပြထားသောကြောင့် အများအ ...
ရွှင်ပျော်ပျော် အဆိုအသင်း သည် အမေရိကန် Fox ရုပ်သံဌာန မှ ထုတ်လွှင့်သည့် ဂီတဇာတ်မြူး ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်သည်။ ယင်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ လီမာမြို့ရှိ William McKinley အထက်တန်းကျောင်းမှ ရွှင်ပျော်ပျော် အဆိုအသင်း က New Directions အမည် ...
စူပါဆန်တိုင် သည် ဂျပန် ရုပ်မြင်သံကြားစီးရီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝါရိန်းဂျား ဇာတ်လမ်းများ၏မူရင်းဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ သည် ဂျပန်ကျွန်းစုတွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော ရိုးရာပုံပြင်များ၊ ပါးစပ်ပြော ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းများနှင့် ယုံကြည်မှုအယူအဆများ၏ အစုအဝေးဖြစ်သည်။ ရှင်တိုဘာသာနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရိုးရာအစဉ်လာများသည် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ၏ အဓိကအခြေခံအကြောင်းရာများဖြစ်သည်။ တရုတ်၊ က ...
အီဂျစ်ဒဏ္ဍာရီ သည်ရှေးခတ်အီဂျစ်ပြည်မှ ဒဏ္ဍာရီ အစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်၏။ ထိုဒဏ္ဍာရီ၌ အီဂျစ်သူအီဂျစ်သားများ၏ ကမ္ဘာလောကကိုနားလည်စေရန် အီဂျစ်နတ်ဘုရားများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ဤဒဏ္ဍာရီများကဖော်ပြထားသည့် ယုံကြည်မှုများသည် ရှေးခေတ်အီဂျစ်ဘာသာ၏ အရေ ...
မေတ္တာ နှင့် သူရာ
မေတ္တာနှင့် သူရာသည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်လောက၏ ပထမဦးဆုံးသော အသံတိတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်နည်းအားဖြင့် မြန်မာ့ ပထမဆုံးသော ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ မြန်မာ စာရေးဆရာကြီး ပီမိုးနင်း ရေးသားသော ဝတ္ထုကို နောင်တွင် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ဖခင်ကြီး လန်ဒန်အတ် ဦးအုန်းမောင ...
ဂျပန့်ရင်သွေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ၁၉၃၅ ခုနှစ်၊ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့၌ ရိုက်ကူးထားသော မြန်မာရုပ်ရှင်တစ်ကားဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ ဦးညီပုမှ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဂျပန်အမည်မှာ Nippon Musume ဖြစ်သည်။ မြန်မာကုမ္ပဏီ အေဝမ်းဖလင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပီစီ ...
ခရမ်းရောင်လွင်ပြင် သည် ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ကမြန်မာ နိုင်ငံ အခြေခံဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လောက်က ရုပ်ရှင်ကား တစ်ကားဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်း သရုပ်ဆောင်နဲ့ မြန်မာ ရုပ်ရှင် မင်းသမီးနှင့် တွဲပ ...
The Burmese Harp of Burma၊ ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ၊ မြန်မာ ဘာသာဖြင့် "ဗမာ့စောင်း" သည် ဒါရိုက်တာ Kon Ichikawa ရိုက်ကူးသော စစ်ဆန့်ကျင်ရေး အဖြူအမဲ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မြန်မာပြည်ရောက် ဂျပန်စစ်သား တစ်စုကို ဇာတ်အိမ်တည်ထားကာ မြန်မာပြည်တွင် လ ...
ဆေတန် ၅ ဒုံးပျံ
အဆိုပါ Saturn V ကို တစ်ဦးအမေရိကန် လူ့-rated ခဲ့သည် မှန်သမျှကိုအ ဒုံးပျံ ဒါဟာအစဉ်အဆက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအခြေအနေကိုမှယူဆောင်အရပ်အရှည်ဆုံး, အပြင်းထန်ဆုံးနှင့်အာဏာအရှိဆုံးဒုံးပျံဖြစ်နေဆဲပဲအပြင်းထန်ဆုံးပစ်လွှတ်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်စံချိန်ရရှိထားသူဖြစ်ပါ ...
သင်္ကြန်မိုး သည် ၁၉၈၄ ခုနှစ်က ရိုက်ကူးခဲ့သော မြန်မာရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲတွင် ဇာတ်ကားဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု နှင့် ဓာတ်ပုံဆု အကယ်ဒမီ ဆု ၃ ခု ရရှိခဲ့သော ဇာတ်ကား တစ်ကား ဖြစ်သည်။ မန္တလေး သင်္ကြန်ကို နေ ...
အခြေခံပညာ ကျောင်းပေါင်းစုံ အားကစားပြိုင်ပွဲများကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပလာခဲ့ရာ အဆိုပါနှစ်တွင် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲများ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ ခုနှစ်တွင် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ၊ ပြေးခုန်ပစ်ပြိုင်ပွဲ၊ ဘောလီဘောပြိုင်ပွဲ ...
မရေမရာ aka Waisetsu Netto Shūdan Ikasete!! နှင့် Group Suicide: The Last Supper သည် တိုရှိယ အုအဲနို ဒါရိုက်တာတိုရှိယ အုအဲနို ရိုက်ကူးသော ၂၀၀၃ ဂျပန် ပန်းရောင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ပန်းရောင်ဂရင်းပရစ်ဆုပေးပွဲတွင် တစ်နှစ်တာအတွက် အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်အဖြစ် ...
ဂျာနယ်ကျော် မမလေး၏ နာမည်ကျော် သွေး ဝတ္တုအား ဂျပန်ဒါရိုက်တာ Koji Chinoမှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင် ရိုက်ကူးခဲ့သော ရုပ်ရှင်ကား ဖြစ်သည်။ ပထမ ဦးဆုံးသော ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပူးပေါင်း ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးမှု လည်းဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ် အမည်မှာ "The bonds of bl ...
ဗနတီဖဲယား သည် မီရာ နေး ရိုက်ကူးသော ၂၀၀၄ ရာဇဝင်ရုပ်ရှင် ဖြစ်သည်။ ဝီလျံ မိတ်ပိ သက္ကရေး ရေးသားသော ၁၈၄၈ ထုတ် ဗနတီဖဲယား ဝတ္ထုကို မှီငြမ်းထားသည်။ ၎င်းဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ကားနှင့် ရုပ်သံများစွာက မှီငြမ်း ရိုက်ကူးကြသည်။ Reese Witherspoon သရုပ်ဆောင်သော ဘက်ကီ ...
ဘာကွာလို့လဲဗျာ ဆိုသည့် ဇာတ်ကားသည် ဂျာမန်အမည်ဖြင့် Männer wie wir ဟု အမည်ပေးထားပြီး၊ ၂၀၀၄ ခုနှစ်ထွက် အားကစားဟာသ ဇာတ်ကားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒါရိုက်တာ Sherry Hormann မှ ဂေး ဘောလုံးဖမ်းသမားတစ်ယောက်ကို ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုဂေး ဘောလုံး ...
မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကိုကျော်လွန်၍ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြသခဲ့ပြီး ဒါရိုက်တာ စံရွှေမောင်မှ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ထိုဇာတ်ကားဖြင့် ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆုကို နိုင်နုရှိန်မှ ရရှိခဲ့သည်။
ဘားမားဗီဂျေ ဇာတ်ကားသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၀၇ ခုနှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သော သံဃာတော်များ ဦးဆောင်သည့် လူထုအုံကြွ ဆန္ဒပြမှုကို ကမ္ဘာသိအောင် မြန်မာပြည်တွင်းမှ မြေအောက် ဗီဒီယို သတင်းထောက်များ သက်စွန့်ဆံဖျား ရိုက်ကူးထားသည့် မှတ်တမ်းတင် ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဤရုပ် ...
The Hurt Locker ကို မာ့ ဘိုး Mark Boal က ဇာတ်ညွှန်းရေးသားပြီး အမျိုးသမီး ဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တဲ့ ကက်သရင်း ဘစ်ဂလို က ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ‘အိုင်အီးဒီ’ ဗုံးတွေကို ရှင်းလင်းဖို့ ဘဂ္ဂဒက်မြို့က လမ်းမပေါ်ကင်းလှည့်နေတဲ့ အမေရိကန် စစ်သားတွေအကြောင်း ရိုက်ပြထားတဲ့ ...
အနုပ်စုတ်ကုပ်စုတ် သူကြွယ် (ရုပ်ရှင်)
အနုပ်စုတ်ကုပ်စုတ်သူကြွယ် သည် ၂၀၀၈ ခုထွက် ဗြိတိန်−အိန္ဒိယ ဖက်စပ်ရိုက် အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယ စာရေးဆရာ ဗီကတ် ဆွာရပ်ရေးသည့် အမေးအဖြေ ဝတ္ထုကို ခပ်ပါးပါး မှီးငြမ်းထားသည်။ မွမ်ဘိုင်းရှိ ဂျူဟူ ကျူးကျော်ရပ်နေ အသက် နှစ်အရွယ် ဂျမား မာလစ်၏ ဘဝကို အမေး ...
ကိုယ်ရံတော်နှင့် လုပ်ကြံသူများ ဇာတ်ကားသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ရုံတင်သည့် ဟောင်ကောင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ တရုတ်တော်လှန်ရေးသမား ဒေါက်တာ ဆွန်ယက်ဆင် ချင်းမင်းဆက်အား တွန်းလှန်ရန် ဟောင်ကောင်၌ ကြံစီခဲ့ပုံ သမိုင်းအကြောင်းကို ဇာတ်အိမ်တည်ကာ ရိုက်ကူးထားသည့် ဒါရိုက်တ ...
တိတ်ဆိတ်နေခဲ့သော (၂၀၁၁ တောင်ကိုရီးယား ..
နိဗ္ဗာန်ဘုံတွင် လမ်းပျောက်ခြင်း (ရုပ် ..
ပင့်ကူလူသား အိမ်ပြန်လာခြင်း (၂၀၁၇ ရုပ ..
ဒိုရေမွန်: နိုဘိတ၏ လပေါ်စူးစမ်းရေးခရီ ..
တရုတ်ဘာသာစကားကို ရုံးသုံးဘာသာအဖြစ်သုံ ..